TOAMASINA : Tovovavy avy niala voly, hita faty feno dian’antsy teo amoron-dalana ny alarobia teo
Nahitana faty nitsirara teo amoron-dalana amin’ny lalan-kely tao amin’ny fokontany Mangarivotra-Atsimo, Toamasina parisela 21/52 ny maraimben’ny alarobia 18 marsa lasa teo. 19 mars 2020
Tovovavy antsoina hoe Vanessa 22 taona avy any Fenoarivo-Atsinanana ity hita faty ity. Raha ny fanazavana voaray, dia nisy nahita ity tovovavy ity tao amin’ny efitrano fandihizana iray tao Ankirihiry, ny alin’ny talata hifoha alarobia.
Fantatra araka ny nambaran’ny vaovao miely amin’ity trangana vono olona tao Toamasina ity fa nisy andiam-behivavy tao amin’ilay efitrano fandihizana tao Ankirihiry io nilaza an’i Vanessa ho miseho milay. Izy izay azo ambara fa tovovavy tokoa, manana ny hatsaran-tarehy. Ny angom-baovao hatrany no nahalalana fa sambany ity tovovavy ity no niditra ilay efitrano fandihizana tao Ankihirihry ka tombanana ho fialonana noho ny hatsaran-tarehiny no anton’ny famonoana. Mety tsy zakan’ny vehivavy sasany sao tara aminy ny lehilahin-dry zareo, dia aleo novoinoina, hoy ny fanehoan-kevitra. Ny valin’ny fanadihadiana sy famotorana kosa no tena hahafantarana ny tena marina.
Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Nahitana lavaka vokatry ny dian’antsy ny lohany sy teo ambanin’ny sofiny havanana, mangana ny tendany. Nosaromana harona plastika sy lamba notazomina tamin’ny fehin-kibo ny lohany. Raha ny tombana, dia novonoina avy tamin’ny toeran-kafa fa natsipy teo amin’ny lalan-kely. Tamin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra, dia mbola andrasana ao amin’ny Tranompokonolona ao Mangarivotra ny razana miandry ny fahatongavan’ny fianakaviana.
Fifanandrifian-javatra sa… ?
Tsy lavitra ilay toerana nahitana ny taolam-balon’i Owne Alek herinandro lasa ilay lakan-kely nahitana ny vata mangatsikan’i Vanessa.